ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆရာသမားနှစ်ယောက် နှင့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တို့က ကျွန်တော့်ကို ကောင်းကောင်းကြီး နှိပ်စက်ကြတယ် :( သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် (Fido) ကလည်း သီချင်းတွေလာယူတဲ့။ ကြည့်လိုက်တော့ သင်္ကြန်မိုး သီချင်းတွေ :( ဆရာသမားတစ်ယောက် (ကိုတုံ) ကတော့ လောလောလတ်လတ် နှိပ်စက်တာပါ။ အခုလေးတင် သူ့ဘလော့ကို ဖတ်ပြီးတယ်။ မန်းလေးသတင်းတွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီသတင်းကြီးပါလာတယ်။နောက်ဆုံး အနေနဲ့ မန္တလေး မြို့တော်ဝန် မဟာသင်္ကြန် မဏ္ဍပ်ကို စတင် ဆောက်လုပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းပေးပါရစေ...တေချင်တယ်။ မျိုးကျော့မြိုင် သီချင်းထဲကလိုပဲ "ဘာလုပ်ရမှန်း မသိပါဘူး။ ဘယ်သွားရမှန်း မသိပါဘူး" ဖြစ်နေပြီ။ ဒီအချိန် မန်းလေးမှာရှိရင်တော့ လှုပ်လှုပ်ရွရွပေါ့။ ကျုံးဘေးက ဖြစ်သွားရင်ကိုပဲ စိတ်ထဲမှာ ကြွနေတာ။ အခုတော့ ခဲလုံးနဲ့ဖိထားသလိုပဲ အဲဒီစိတ်တွေလည်း ဘယ်ရောက်ကုန်မှန်း မသိတော့ဘူး။
ဆရာသမားနောက်တစ်ယောက် (ကိုဆန်းဦး) ကလည်း ဘလော့မှာ သီချင်းတင်ထားပါတယ်။ သင်္ကြန်နိဒါန်းတဲ့ :( အခု နိဒါန်းလည်း မသိဘူး။ နိဂုံးလည်း မသိတော့ပါဘူး။ ဟား .... သင်္ကြန်ရက်မှာ သေချာတာကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားဖြစ်ဖို့ပဲ။ အဲဒါပဲ ရှိတယ်။ အထင်တော့ မကြီးလိုက်နဲ့ဦး။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတာ တရားအလုပ် လုပ်ဖို့ထက် ပျင်းလို့သွားတာဖြစ်ဖို့ များလိမ့်မယ်။ စင်ကာပူ ရောက်နေရင်လည်း ကောင်းသား။ ဘာပဲပြောပြော မြန်မာတွေ ဒီမှာထက်ပိုများတယ်။ ပွဲလေးဘာလေး လုပ်ကြသေးတယ်။ ဟာ ... တော်ပြီ ... အိပ်ပြီ။
What's wrong? Who's fault?
သင်္ကြန် နှင့် ဘလော်ဂါများ
မန်းလေးမှာလည်း ပွတ်ကုန်ပြီ (DJ..DJ)
Donations4MOM's Birthday
Making Simple Cloud Label
InternetExplorer, FireFox and Opera
ဘယ်သူသေသေ ငတေ မပါရင် ပြီးရောလား
စာပေ နှင့် ဘ၀တိုးတက်အောင်မြင်မှု
Changing MyBlogLog Readers Style
Angel by Tha O
Happy Birthday Ko Zaw Moe Aung
KlipFolio4- The Personal Desktop Dashboard
Style XP - Theme Your Desktop
ရာသီဥတု ဘာလဲ .. ဘယ်လဲ
Accordion Panel Magic by PVII
Agnitum Outpost Firewall Pro 4.0 Build 1007591.145...
Free Web Template Sites
သီချင်းနားစဉ်ခြင်း နှင့် လူမှုရေးအသိ
Rocket Dock 1.3.0
250 Plugins + 350 Actions
အရက်တို့၏ သဘော သဘာဝ
Future of Web Apps 2007
Web2.0 Photoshop STYLES
Lightbox JS v2.0 Testing
MYANMAR - BURMA - THE GOLDEN LAND